I-valve ejikelezayo isetshenziswa kakhulu ezintweni ezifana nama-dusters, izikali ze-elekthronikhi nemishini eyandisayo esenqubo yokukhiqiza ifolishi njengokulungisa, ukwelashwa, ukuphihliza, ukuxuba, ukuthambisa, ukwandisa, ukupakisha kanye nokugcinwa kwezinto ezingavuthiwe. Sihlinzeka nge-rota...
Siklama futhi sakha i-valve yekhemikhali ejikelezayo ngokwezimpawu zezinto ezivutha umlilo, eziqhumayo, ezinobuthi nezigqwalayo ezikhishwa isitshalo samakhemikhali. Ekukhiqizeni amakhemikhali, okuphakathi kuvame ukuba nomfutho ophezulu kanye nezinga lokushisa. Ngokusho kwesimilo...
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezidingo zabantu zokuphepha kokudla, senze ucwaningo olujulile kanye nentuthuko ezimbonini ezihlukahlukene zokudla. Futhi siklama futhi sikhiqize imikhiqizo ngesisekelo Samazinga Kazwelonke Okuphepha Kokudla kanye ne-General Hygienic Standard for Food...
Sinikeza isevisi eyodwa-stop yephrojekthi yokusanhlamvu kumakhasimende afana nezinsizakalo ezihlelekile ezihlanganisa ukuklama, ukufakwa, ukulungiswa nokwamukelwa. Futhi sihlela ngokukhethekile onjiniyela berayisi, ufulawa kanye nowoyela ukuthi bafunde ngezici zokusetshenziswa kwe-valve ejikelezayo e-vario...
Imishini yemithi kanye nemishini idlala indima ebalulekile enqubweni yokukhiqiza, futhi njengokukhishwa, indima ye-valve ejikelezayo emoyeni wokuvala, izinto zokuthutha nazo zibalulekile ezimbonini ezinkulu zemithi. Kusukela kokubalulekile, inqubo, ukwakheka kanye ne-EH...
Amaminerali afana nosimende, umcako, umlotha wesihlabathi, i-alunite ngokuvamile anezimpawu zobulukhuni obuqinile nobuqinile. Uma i-valve ejikelezayo isetshenziselwa ukuthutha zonke izinhlobo zezinto ezimbiwa phansi, ibeka phambili izidingo eziphakeme zamandla emishini eyimishini kanye nokumelana nokugqokwa....
I-Electronic Control Valve, I-3 Way Ball Valve, i-rotary feeder, i-valve ye-airlock, i-valve ejikelezayo, I-3-Way Diverter Valve,